လိင်တူချစ်သူဆယ်ကျော်သက်မိခင်အဖြစ်ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးသက်တမ်း - သတင်း
လိင်တူချစ်သူဆယ်ကျော်သက်မိခင်အဖြစ်ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးသက်တမ်း
Zara သည်အသက် (၄) နှစ်အရွယ်သမီးဂျေမီနှင့်အတူ UCL တွင်ဓာတုဗေဒဘွဲ့ကြိုဖြစ်သည်။ သူမသည်တက္ကသိုလ်တွင်လိင်တူချစ်သူမိခင်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံများကိုသူမအားမေးမြန်းခဲ့သည်။
ဒီဆောင်းပါးပါနာမည်အားလုံးပြောင်းပြီး Jamie ရဲ့လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ဖို့။
မာရီယာ Veiga အားဖြင့်သရုပ်ဖော်ပုံများ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် (၁၆) နှစ်အရွယ်တွင်ကိုယ်ဝန်ရပြီး ၁၇ နှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ AS အဆင့်အတန်းကိုကျောင်းတက်နေခဲ့ရသည်။
ငါတတ်နိုင်သလောက်ကျောင်းမှာနေပြီး3As နှင့် B ကို AS အဆင့်မှာရခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်အားလုံးကဆင်းသွားပြီး DEF ကိုအဆုံးရလိုက်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့၏မျိုးပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာငါတကယ်ဘာသာရပ်များခံစားမခံခဲ့ရပါဘူး။ ငါတစ်နှစ်ထွက်ပြီးတော့ A-level ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်အလယ်ပိုင်းလန်ဒန်ကောလိပ်သို့ရောက်ကြ၏။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဝေါဟာရတစ်ခုအားဓားဖြင့်ထိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ် ဦး မှာကျွန်ုပ်လည်းသက်သေခံဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်လည်းအခန်းထဲတွင်အဖြူရောင်လူတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ [Zara သည်မြောက်အာဖရိကဖြစ်သည်] ဘာကီဟမ်ရှီးယားရှိမိန်းကလေးများသဒ္ဒါကျောင်းပြီးသည့်နောက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါဓာတုဗေဒစိတ်မရှိဘူး၊ ကောလိပ်ကိုဘာကြောင့်ပြန်သွားတာလဲမသိဘူး၊ ငါ့ကိုတွေ့ပြီလို့ငါထင်တယ်။
ဒံယေလ Kahneman မှတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်နှေးခြင်းကိုသင်ဖတ်ဖူးပါသလား။
သူကအမြဲအရာအားလုံးယုတ်ဖို့ဆုတ်ယုတ်ဘယ်လောက်အကြောင်းပြောထားသည်, ငါအမြဲတမ်းသိပ္ပံပညာ၏ယုတ်အဖြစ်ဓာတုဗေဒ [ရယ်သံများ] y'know, လူတိုင်းအဲဒီမှာအခြေချပုံရသည်သိပ္ပံပညာ၏အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရစိတ်ဝိညာဉ်၌။
ငါကောလိပ်ကျောင်းတက်တုန်းကငါအိမ်မှာနေပြီးတစ်နေ့ကို ၃ နာရီလောက်လမ်းလျှောက်တယ်။ ရထားပေါ်မှာအိမ်စာလုပ်ဖို့အချိန်အလုံအလောက်ရှိခဲ့တယ်။
ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာမိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာ A အဆင့်ကိုလုပ်ပြီး A-level စာသားစာအုပ်တွေကိုပုန်းဖို့အရမ်းအသက်ကြီးလွန်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါကအရမ်းလျှို့ဝှက်အမှန်တကယ်လုပ်ခဲ့တယ်။
ငါအများကြီးအသက်ကြီးတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါအများကြီးအသက်ကြီးတာနဲ့တူတယ်၊ ငါ့သင်တန်းကတခြားလူတွေထက်ငါကထူးဆန်းတာပဲ။
ဂျေမီသည်သင်သာအခြားမိဘများကိုကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက၊ ၃၃ သည်သူတို့ကလေးမွေးဖွားသည့်အရွယ်ဖြစ်သည့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ခုသို့သွားသည်။
ငါတကယ်မှာအားလုံးသူတို့အားယောက်ျားတွေနှင့်အတူခွဲခြားသတ်မှတ်ကြဘူးဒါပေမယ့်ငါမျိုးငါခြံစည်းရိုးပေါ်မှာထိုင်တယ်, ဒီမှာဖြစ်စေပထမ ဦး ဆုံးနှစ်နှင့်အတူအပြည့်အဝခွဲခြားသတ်မှတ်ကြဘူး။
သူမ၏အဘိုးအဘွားအတော်များများကအကူအညီတွေ။ အကြှနျုပျ၏မိခင်အာဒံ (အဘ) မိဘများကအချို့ပေးဆောင်ငါကအချို့ပေးဆောင်, ကအချို့ပေးဆောင်။
ယခုအာဒံတွင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းများ လုပ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကလေးအထောက်အပံ့ပေးသည်။
ပြီးတော့အိမ်မှာဂျေမီကိုသင့်ဇနီး Haley ကစောင့်ရှောက်တယ်။
၂၀၀၉ နွေရာသီမှာသူမဟာ ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာလမှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့တယ်။
[Pauses] အသက်အမျိုးအစားနဲ့သိပ်ပြီးမကိုက်ညီသူတစ်ယောက်အတွက်ငါလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ပုံစံကိုချောချောမွေ့မွေ့ fit လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
သူမကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်သာမန်လူများလုပ်သည့်အတိုင်းသာလုပ်သည်။ အချို့သောညများ၌သူမအားသူမ ၅ ရက်နှင့်သူမမဖြစ်နိုင်သည့်ညများနှင့်ကျွန်တော်တို့အကြားခွဲထားခဲ့သည်။
တဖန်သင်တို့လန်ဒန်မှာရောက်နေတယ်၊ ​​သင်၌ပထမနှစ်တွင်နေထိုင်သော residence ည့်ခန်းတစ်ခန်းရှိသည်။
တစ်ပတ်ကို ၃ ည ၄ ပတ်လောက်ငါဒီမှာရှိနေတယ်။ သောကြာနေ့ညနေကနေတနင်္လာနေ့အထိငါပြန်ပြောလိမ့်မယ်။
သငျသညျပြန် dash ပြော, သင်ဂျေမီအဘို့သင့်သင်တန်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှလက်လွတ်ခဲ့ကြပြီလော
ငါသူမရဲ့ကျောင်းပြဇာတ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဟောပြောပွဲတစ်ခုလွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် UCL ကသူတို့ဓာတုဗေဒဌာန၌လုပ်သောဟောပြောပွဲတိုင်းကိုငါပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကျမကမနက် ၉ နာရီဟောပြောချက်ထက်စာသင်ခန်းစာပြန်ကြည့်တာဟာငါ့အတွက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
အဆိုပါဟောပြောပွဲပြဇာတ်ရုံကယ့်ကိုနွေးသည်သူတို့အလင်းများမှေးမှိန်လိမ့်မယ်ငါအမြဲတမ်းတစ်နည်းနည်းနဲ့တကယ့် fluffy ကုတ်အင်္ကျီနှင့်အတူတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ထိုင်ရန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ငါများသောအားဖြင့်ပယ်မူး။
အဘယ်သူမျှမမှာအားလုံးတကယ်တကယ်တော့ပေမယ့်ပြီးသားသူမ၏နှင့်အတူ A-level ကိုပြုတော်မူပြီးမှငါကရန်အသုံးပြုပါတယ်။ သူမသည်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ သူမသည်တခါတရံ mummy မကစားနိုင်သည်ကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်။
တခါတရံတွင် A အဆင့်တွင်သူမအသက် ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်အရွယ်များ၌ကျွန်ုပ်သည်အချို့သောအလုပ်များလုပ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်သူမအရောင်ရှိသောခဲတံပုံကြီးများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ထိုစဉ်ကသူမမျက်လုံးသည်အရူးနှင့်တူလာလိမ့်မည်ကိုသူသိသည်။ အထူးများနှင့်ပူးပေါင်းလိုသည်။
လတ်ဆတ်သောရက်သတ္တပတ်အဘို့, ငါသည်ငါ့ဇနီး၏အားပေးမှုမှာလုံးဝအရာအားလုံးကိုမှလက်မှတ်ဝယ်ယူခဲ့သည်ငါကပထမ ဦး ဆုံးညဉ့်တွင်ကလပ်အရမ်းပူခြင်းနှင့်ကျယ်လောင်လွန်းသောကြောင့်လူအများကြီးနှင့်ငါ့ခြေနာကျင်သောကြောင့်, သူတို့ထဲကတ ဦး တည်းသာအသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါသည်ကိုကိုကို၏နောက်ကျောတွင်နတ်သမီးတစ်ပါးနှင့်ဘုရားအကြောင်းပြောသောအရာနှင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ငါမနက် ၁ နာရီတွင်ထွက်ခွာခဲ့သည်။ သူက Facebook မှာကျွန်တော့်ကိုထပ်ထည့်တယ်။
အိုး [ရယ်မောသံများ] ငါလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူတွေထဲမှာပါနေတယ်၊ ​​ကျွန်တော်အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုမေ့သွားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ဟာငါတို့တွေအများကြီးသောက်ပြီးတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး နစ်မြှုပ်နေတာပဲဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်လို့ထင်တယ်။
ငါအခြားနေ့က Imperials လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်, ဒါကြောင့်အတော်လေးရယ်စရာအတွေ့အကြုံကိုခဲ့သူတို့ကကြင်နာအိုးသငျသညျ UCL ကိုသွားတူသောဆင်းရဲသား ... ငါသည်သင်တို့ကိုမကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်တစ်ခု Imperial မဂ္ဂဇင်းထဲမှာထည့်သွင်းရန်မလိုချင်ကြဘူး !
[ရယ်မော] သင်သည်နောက်နေတာ, သူတို့ကိုဂုဏ်ယူစေလိမ့်မည်!
ငါသိပ္ပံဘာသာရပ်လုပ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာပါပဲ, ငါပင်အနုပညာဘာသာရပ်လုပ်နေတာငါကောင်းစွာချွတ် fuck ဆိုတဲ့ကဲ့သို့မဖွစျနိုငျသညျ
Ouch ။ ဇာတ်လမ်းထဲပြန်သွားပြီးအနည်းငယ်မျှသာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်တူဆက်ဆံသူတစ် ဦး သည်မည်သို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မည်နည်း။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ဘဝအတွက်ခက်ခဲအောင်လုပ်နေတာပါ၊ ကျွန်မမှာဘာကင်ဟမ်ရှိုင်းယားမှာလူနည်းစုလူမျိုးစုမွေးဖွားလာတာ၊ ၁၇ နှစ်မှာကိုယ်ဝန်ရလာတာ၊ ကျွန်တော့် A2s တက်တာ၊
တကယ်တော့ငါ့အမေအရင်တုန်းကငါ့ဆီပြောခဲ့ဖူးတာကသူမမှာများများစားစားရှိပြီးငါ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကိုယ့်ဘ ၀ ကိုခက်ခဲအောင်လုပ်နေတာလားလို့ငါ့ကိုပဲမေးခဲ့တယ်။
ဒီတစ်ခါလည်း subconciously ။ ဆိုလိုတာကငါအခက်ခဲဆုံး A-level အဆင့်ကိုရှာတွေ့တယ်။
ဟုတ်တယ်ငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရယ်စရာကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမအသက် ၁၃ နှစ်မှာအာဒံနဲ့တောင်မတွေ့ခင်ကျွန်မမှာပထမဆုံးရည်းစားရှိခဲ့တယ်။
ပြီးတော့ ၁၄ ကနေ ၁၇ ရက်အထိငါတို့အတူတူခဏတာအတူတူနေခဲ့ကြတာပါပဲ။ ငါနဲ့သူ့လက်ရှိရည်းစားကထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။ ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်။
အင်းသူငါသူ့ကိုရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်ခဲ့သည်, ငါသည်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးများအနေဖြင့် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်ရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောသေချာမှုနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလိမ့်မည်ဟုပြောပြီး၊ ရပ်စဲခြင်းအစီအစဉ်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သွားတွေ့ခဲ့သည်။ ငါရပ်စဲဘို့အချိန်နှင့်နေ့စွဲကြိုတင်ဘွတ်ကင်နှင့်ငါပဲဖြတ်သန်းလို့မရဘူးသမျှအကြောင်းပြချက်များအတွက်။
ငါကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမိန်းကလေးများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမာရွတ်နှင့်ပတ်သက်။ ထိတ်လန့်ပုံပြင်များဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့်ကောင်းစွာမကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သောမိန်းကလေးအချို့ကိုငါဆိုလိုသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းခံခဲ့ရသောအမျိုးသမီးအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်သိပြီးသူတို့မှာ ၁၆ နှစ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ ၎င်းတို့သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်အဆင်ပြေပါသည်။
ငါကိုယ်ဝန် 16 ပတ်မှာကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းထောက်ပြသင့်ပါတယ်။ ငါအစောပိုင်းကထွက်တွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအခွအေနေပါပြီနိုင်ဘူး။
ငါအချိန်ကန့်သတ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌နေဆဲဒဏ်ငွေခဲ့ပေမယ့်ငါကအမှုကိုပြုချင်လျှင်, ငါကအကြောင်းမျှမျှတတချွန် - ish ခဲ့ကြရတယ်လိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းသိသောအခါအာဒံတက္ကသိုလ်မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ သူကသူ့မိဘတွေကိုပြောပြဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော့်အမေကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော့်အမေကသူတို့ဟာအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးစုဆောင်းနေတယ်၊
အဲဒီနောက်မှာအာဒံရဲ့အမေကကျွန်တော့်ကိုကောက်နေတာ၊ ရက်ချိန်းယူဖို့ခေါ်တာ၊ ကလေးအတွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်တာ၊ ငါလေးစားမှုအတွက်အလွန်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။
အစဉ်မပြတ်ငါတိတ်ဆိတ်ထားရှိမည် ... [ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်း] လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့အတူတူကလေးတစ်ယောက်ရှိခြင်းဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးလောက်လောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအဆင်သင့်မိသားစုပါပဲ။
ငါပထမ ဦး ဆုံးဆက်ဆံရေးသို့ ဦး ခေါင်းခုန်ဘို့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားနေဆိုပါစို့။ ငါဖြစ်စေလိင်အရအခွင့်အရေးမရချင်ပေမယ့်သင်သူတို့နှင့်ပတ်သက်။ အရာအနည်းငယ်ကိုလျစ်လျူရှုရန်ဆန္ဒရှိနေသောသင်ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုတွေ့သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများစွာသည်တစ်စုံတစ်ရာအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းမလာသည်ကိုသတိပြုမိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်မင်းကိုကြည့်ပါ။ မင်းဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမပြည့်ဝဘူး…… [ခဏရပ်ပြီး]
Soho ရှိ Candy Bar ရှိသူငယ်ချင်းများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်သည် Hayley နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်နံပါတ်များဖလှယ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ပတ်တွင်သူမကကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင်ဂျေမီသည်အာဒံနှင့်အတူအားလပ်ရက်ခရီးထွက်ခဲ့ရသည်။ ဟေလေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အပြင်သို့ ထွက်၍ ကျွန်ုပ်၌သုံးရက်နေခဲ့ရသည်။ ဒါမှမဟုတ်သူမထည့်လိုက်ရင်ငါသုံးရက် [ရယ်သံများ] ထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။
သူမသည်ထိုအချိန်ကကော့စ်တာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးသူမ၏တိုက်ခန်းတွင်ကျွန်ုပ်ကိုထားခဲ့ပြီးနောက်သူမတွင်အခြားမည်သည့် ၀ န်ထမ်းမှ မရှိ၍ အခမဲ့ Wi-Fi ကိုသာအသုံးချသောကြောင့်သူမ၏အဝတ်အစားများ ၀ တ်ထားသည်။
ဒါဟာအားလုံးယခုပြန်ကြည့်ဒီတော့ creepy ပုံရသည်!
သင်ရောက်ရှိနေသည့်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကံကောင်းသည်ဟုခံစားရပြီးပြီဟုသင်ပြောပြီးပြီ
လူတွေဟာငါ့ဘဝအကြောင်းငါ့ကိုမေးတဲ့အခါအဲဒါတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်ပြတာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ပျော်တယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှထူးဆန်းတဲ့သို့မဟုတ်တင်းမာပုံရသည်။
Hayley ရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတာကသူမလိုချင်တဲ့ပျင်းရိမှုကိုငါကောက်ယူပြီးငါ့မိသားစုကလည်းပါလိမ့်မယ်။ ငါအရာအားလုံးကိုလုံးဝမှားယွင်းတဲ့အတိုင်းပြုမိသကဲ့သို့ငါအရာအားလုံးထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပုံရသည်။
ငါသူမသာ4င်သိပေမယ့်ဓာတုဗေဒသို့ဂျေမီဖြစ်သနည်း
သူမကသဘာ ၀ သမိုင်းဆိုင်ရာပြတိုက်ကိုသူချစ်တယ်ဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသူမကိုရေချိုးပေးခဲ့သည်။ သူမကကမ္ဘာနှင့်အရာအားလုံးကိုထပ်မံတီထွင်ခဲ့သောသက်ကြီးရွယ်အိုမိခင်ဖြစ်သူ Mummy ကိုပြောခဲ့သည်။ ငါကောင်းပြီပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်, mummy ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူဟောင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဟုမယုံကြည်ပါဘူး။
ဂျေမီသည်စက္ကန့်ကြာစဉ်းစားရင်းထိုင်လျက်ထိုင်နေသည်။ ထို့နောက်သင်မဟုတ်ပါဟုပြောခဲ့သည်။ သူမကသေးသေးလေးသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ရန်အတွက်၊ သူကဒိုင်နိုဆောများ၊ မျောက်များနှင့်ပစ္စည်းများကိုမေ့နေသည်။
[ခေတ္တခဏ] ငါဒါမထင်ကြဘူး။ ငါဖြစ်ပိုကောင်းတဲ့နေရာစိတ်ကူးလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, အမှုအရာပိုမိုဆိုးရွားစေအံ့သောငှါလမ်းတစ်လျှောက်ဘာမှပြောင်းလဲသွားမည်ကိုကွောကျရှံ့ဘို့။
[နောက်တဖန်ကြာမြင့်စွာခဏရပ်ရန်] အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည် A အဆင့်တွင်သင်္ချာကိုပြုလိမ့်မည်။
ဒီဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လုံးမှာမင်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာက A-Level Math ပါ။
ဟုတ်တယ် ဆိုလိုတာကဓာတုဗေဒသင်္ချာဘာသာရပ်ကိုကျွန်တော်အပြည့်အ ၀ လုပ်ပြီးပြီ။ နှစ်ပတ်အတွင်းပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြင်းသည်ပျော်စရာမဟုတ်ပါ၊ ငါလိုက်မီနိုင်သည်။
သင် matrices နှင့် eigenvectors ထိသည်အထိစောင့်ပါ။
yeah အိုးငါလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းငါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် ...
Zara သည်မြို့တော်အတွင်းရှိကျောင်းသူကျောင်းသားများအကြားစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုအားပေးသည့်လှူဒါန်းမှုတစ်ခုတွင်တစ်ပါတ်နေ့လည်ခင်း၌အခမဲ့အလုပ်လုပ်သည်။ အကယ်၍ သင်နှင့်တွေ့ဆုံပါကသူမသည် High-5 ဖြစ်သည်။